कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा शुरू भयो एमआरआई र सिटी सक्यान सेवा - खबरम्यागजिन
Homeखबरकालेबुङकालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा शुरू भयो एमआरआई र सिटी सक्यान सेवा
कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा शुरू भयो एमआरआई र सिटी सक्यान सेवा
February 11, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि कालेबुङ, खबर 0
कालेबुङ, 11 फरवरी: कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा अन्तत: सीटी सक्यान र एमआरआई मसिन सञ्चालनमा आएको छ। करोडौँ रुपियाँका लगानीमा ल्याएका यि मसिनहरू एक वर्षभन्दा अघिदेखि कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा उपलब्ध भएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। गत 1 दिसम्बरदेखि एस्काग सञ्जिवनी प्राइवेट लिमिटेड नामक एउटा एजेन्सीद्वारा उक्त मसिनहरू सञ्चालनमा ल्याइएका हुन्।
एस्काग सञ्जिवनीले पहिलेबाटै कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा डिजिटल एक्स-रे चलाइरहेको थियो। अस्पतालपक्षले एमआरआई र सिटी सक्यान मसिनको परिक्षण गरेपछि यसै एजेन्सीसित मसिन सञ्चालनको निम्ति अनुबन्ध गरेको हो।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिसनले लगभग 12 करोड रूपियाँ खर्चेर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरसिप पहल अन्तर्गत जिल्ला अस्पतालमा एमआरआई र सिटी सक्यान मसिन ल्याएको हो।
स्रोतका अनुसार 2017 मा भएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अघि नै सिटी सक्यान र एमआरआई मसिन जिल्ला अस्पतालमा ल्याइएको थियो। तर उक्त मसिनलाई एक वर्षभन्दा धेर लामो समयदेखि अचल राखियो। मसिन ल्याएर उपयोग नगरी बन्द राख्दा हिलियम ग्यास सकिएको कारण यसलाई पुन: सञ्चालमा ल्याउन लगभग 40 लाख रुपियाँ खर्च गर्नपरेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ।
यद्यपि अहिले आएर मसिन सञ्चालनमा आएपछि अबउसो सिटी सक्यान र एमआरआईका निम्ति विरामीहरू सिलगढी जान नपर्ने अस्पतालका जिल्ला अधिक्षक डा. अङ्कन सिम्लाङ्गदीले बताएका छन्।
‘कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा अहिले मानिसहरूले एमआरआई र सिटी सक्यानको सेवा पाइरहेका छन्’-डा. सिम्लाङ्गदीले भने, ‘इन्डोर र ओपीडीका बिरामीहरूले यहाँ निःशुल्क सेवा पाउनेछन् भने प्राइवेट देखाएर आएका बिरामीहरूले पनि बजारभन्दा कम मूल्यमा सेवा पाउनेछन्।’
यसअघिसम्म सिलगढी गएर सीटी सक्यान र एमआरआई गराउन लगभग6देखि 8 हजार रुपियाँसम्म खर्च हुनेगर्थ्यो। अब कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा नै उक्त सेवा शुरू भएकाले मानिसहरूले धेरै राहत पाएको अनुभव गरिरहेका छन्। उक्त मसिनद्वारा बिरामीहरूले शरीरको परीक्षण गरेपछि दोस्रो दिन अनलाइन मार्फत रिपोर्ट पाउनेछन्।
‘एमआरआई र सिटी सक्यानबाट अहिलेसम्म ठिक रिपोर्ट आइरहेको छ’-एमआरआई विभागमा कार्यरत् कर्मचारी प्रतीक्षा छेत्रीले भनिन्, ‘विरामीहरूले चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन।’
विशेष गरी सिटी सक्यान र एमआईआई मसिन सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले विगत वर्ष डम्बरचोकमा पोष्टरिङ गर्दै विभागलाई दवाब समेत बनाएको थियो। अहिले उक्त मसिनहरू सञ्चालनमा आएपछि दलका नेता लोप्साङ तामाङले खुशी व्यक्त गर्दै गरीब जनताका निम्ति पार्टीले माग गरेको अवगत गराए। सिटी सक्यान र एमआईरआई शुरू भएपछि दैनिक औसत6देखि 8 जना बिरामीहरूले जाँच गराइरहेका छन्।
चुनाउमा 30 प्रतिशत महिला उठाउने चामलिङको घोषणालाई स्वागत गर्दै महिलाहरू
हनुमान पनि जनजाति (दोस्रो भाग)